I-Runtastic MountainBike Pro, ngoku isimahla | IPhone iindaba
Runtastic MountainBike Pro, ngoku simahla
Abo bandaziyo bayazi ukuba ndilithanda kakhulu ilizwe le iibhayisikile zeentaba kunye nemidlalo. Ngenxa yobuchule bayo, i-iPhone iye yaba liqabane eliqhelekileyo lendlela kwaye isicelo seRuntastic MountainBike Pro silungele ukugcina umkhondo wazo zonke izinto esiziphumayo.
Isicelo isebenzisa indawo ekuyo iGPS ukufumana indawo yethu kunye nokubala lonke uthotho lweedatha esinokuthi siqwalasele kuzo ngexesha lokwenyani kunye nakwizibalo ezipheleleyo zendlela. Phakathi kwezi datha sinokubona:
Ukubalwa okungalunganga kweekhalori ezisetyenzisiweyo
Iimitha esizinyusileyo / sehlile
Okwangoku / umndilili / isantya esiphezulu
Nathi sinako ukwenjenjalo dibanisa ukusebenza kweRuntastic MountainBike Pro kunye neenzwa ezithengiswa zodwa kwaye oko kuyakusibonelela ngedatha efana nokubetha kwentliziyo, ukuhamba ngenyawo kunye nesantya sendlela ebalwe ngokobungakanani bevili lethu. Ngelishwa, ezi zinto zibiza kakhulu kwaye ziyashenxisa kwisibheno sesicelo ngokuthanda ezinye izixhobo ezinje ngee-polar rate rate monitors.
Ukuqala ngokusisiseko (kodwa kugqityiwe) ukusetyenziswa kweRuntastic MountainBike Pro, sinako silawule ngokupheleleyo zonke iindlela zethu. Singamamela umculo wethu wesiqhelo, simisele ingoma ethile yeyona mizuzu inzima okanye sigcine iimephu ngaphandle kweintanethi ngalo mathuba xa singenakho ukugubungela.
Nje ukuba indlela igqityiwe, usetyenziso lusinika ithuba loku gcwalisa idatha efunyenwe nabanye esiyifaka ngesandla kwaye oko kusivumela ukuba sibonise indawo esihambe kuyo, imood yethu, iqondo lobushushu egumbini, ukubetha kwentliziyo, isantya kunye necandelo lokugqibela lamanqaku.
Zonke iindlela esizenzayo ziya kugcinwa kwiMbali kwaye sinakho yabelane ngazo zombini ngothungelwano kunye ne-imeyile, ke sinako ukucela umngeni kwiqabane lethu eliqhelekileyo.
I-Runtastic MountainBike Pro sisicelo esihlala sixabisa i-euro ezingama-4,99 kwaye ngoku ungonwabela simahla ixesha elilinganiselweyo. Ukuba, khumbula loo nto Ukusetyenziswa kwebhetri kwesi sicelo kunzima kakhulu ke ukuba wenza iindlela ezinde, kungcono thenga ityala ngebhetri yangaphakathi ukwandisa ukuzimela kwe-iPhone.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Amatyala kunye nebhetri yangaphakathi ye-iPhone 4 / 4S yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Runtastic MountainBike Pro, ngoku simahla
UMaolam @ sitsho
I-iphone sele inayo i-gps .. Kutheni uchitha imali kule ???? Xa ndandibaleka, ndisebenzise isicelo seNike kwaye ndaphawula indlela kunye nesantya, njl. Inyaniso kukuba, intle kakhulu ngaphandle kokusebenzisa isicwangciso sedatha.
Phendula ku Maolam @
Kude kube ngoku ndisebenzisa i-traker yezemidlalo, yayintle kakhulu. NgoMgqibelo ndizakuzama lento ukubona ukuba kunjani. Ngaba ukho umntu owakha wayithelekisa?
Ndikunye neSportsTracker esetyenziswa ngabahlobo bam kwiFB, kodwa ndizamile la maxesha ama-2 kule veki kwaye inyani kukuba ndiyayithanda kakhulu.
Into endiyiqaphelayo kukuba iyanya ibhetri engaphezulu.
Ndihlala ndenza imizila ye-2h 30min kwaye ngaphambili ngeSportsTracker ngeselula kwi-100% ndafika ngebhetri kwi-40-50 kwaye ngale nto ndafika malunga ne-20-30.
Endikufundileyo kukuba i-Runstatic ukuba ususa i-3G, i-wifi, njl.njl ... isenayo i-EDGE ngaphandle kokuphulukana nesikhundla nangaliphi na ixesha, kodwa
Ukusebenzisa i-runtastic akufuneki ube ne-intanethi…. ukuba uneGPS ingaphezulu kokwaneleyo! Udinga i-intanethi kuphela ukuba ufuna umsebenzi ngokulandela umkhondo wexesha lokwenyani okanye xa ulayisha ukusebenza kwakho kwindawo ye-runtastic.com, kodwa ukurekhoda umsebenzi wakho nge-GPS kwanele ... ngale ndlela ugcina ibhetri eninzi 😉
Thelekisa: Siri vs Samsung S Voice vs Speaktoit Assistant
IbhetriInfo, iwijethi enolwazi lwebhetri yeZiko leSaziso